Ethiopia oo shir u qabaneysa Somalia iyo Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magada Addis Ababa ee Caasimadda dalka itoobiya ayaa la filayaa in dhawaan lagu qabto shir ay ku wada hadlayaan Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, kaas oo ay martigelineyso dowladda Itoobiya.
Abiy Axmed Ra’iisul Wasaaraha ayaa maalma ka hor ku dhawaaqay in Nabada Soomaaliya ay dan ugu jirto deganaanshaha wadamada Geeska,sidaas daraadeedna Itoobiya iyo Odayaasha Dhaqanka soomaalida ay qeyb weyn ka qaadan doonaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Itoobiya ayaa haatan waxaa ay jawaab ka sugeysaa wafdi ka socda Midowga yurub oo dhawaan tegay Hargeysa lana kulmay Madaxda Soomaaliland,kuwaas oo bixinaya dhaqaalaha ku baxaya wadahallada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in uu fulinayo balan qaadkiisii ahaa in uu ka qeyb qaadan doono Nabada Wadamada Geeska,isla markaana uu doorweyn ku yelanayo wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee la filayo inay ka qaabsoomaan Addis Ababa.